Home Wararka Muxuu yahay ujeedka Cali Guudlaawe loo keenay Muqdisho? Ma xuli doonaa xubnaha...
Muxuu yahay ujeedka Cali Guudlaawe loo keenay Muqdisho? Ma xuli doonaa xubnaha Aqalka Sare?
Madaxweynaha DG Hir-Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo kasoo safray Magaalada Jowhar ayaa soo gaaray Magaalada Muqdisho, waxaana soo dhaweyntiisa ka qaybgalay mas’uuliyiin kala duwan oo ku sugayay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Guudlaawe oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay wax ka qabashada Dagaal beeleedyo ka dhacay Degmada Cadalle ee Gobolka Shabeelaha Dhexe oo ugu dambeyn xalay heshiis ay kawada gaareen Odoyaasha maleeshiyaadka dirirtu dhexmartay.
Madaxweynaha Hir-Shabeelle ayaa sheegay in Caasimadda uu u yimid ka qaybgalka kulan looga hadlayo xaaladda siyaasadda dalka gaar ahaan Doorashada waqtigii lagu heshiiyay dib uga dhacday kadib markii muranka ka dhashay xubnaha Metalaya Dowlad Goboleedyada qaar la sheegay in ay kamid yihiin Nabadsugidda & Madaxtooyada Soomaaliya, halka DG Puntland & Jubbaland ay ka caga-jiideen soo gudbinta xubnaha dhankooda ku maqan.
Guudlaawe oo 11-kii November 2020 ku guuleystay Doorasho ka dhacday Magaalada Jowhar isla markaana ay sii saadaalinayeen Siyaasiyiinta in uu xilkaas ku qabanayo waxaa hortaagan cabasho ka taagan doorashadaas & caga-jugleyn uga imaaneysa dhinacyada diiddan.
Waa maxay ujeedka Cali Guudlaawe ee Muqdisho?
Ilo xog ogaal ah ayaa MOL u sheegay in Madaxweynaha DG Hir-Shabeelle uu Muqdisho usoo gaarayo la kulmidda Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xildhibaannada, Senatarada kasoo jeeda Gobollada Hiiraan & Shabeelaha Dhexe, Wufuud kala duwan oo Beesha Caalamka ah & ka qaybgalka shir la doonayo in looga xaajoodo caqabadda hortaagan Doorashada Soomaaliya.
Cali dhaq-dhaqaaq sidaas u weyn kuma lahan howlaha Doorashada Soomaaliya, maadaama madaxweynihii ka horeeyay ee Maxamed Cabdi Waare uu gudbiyay Guddiga ku metalaya Doorashada, sidoo kale kama uusan ka qaybgelin kulamada Madaxda DFS & kuwa Dowlad Goboleedyada.
Ilo kale ayaa MOL u sheegay in Madaxda DFS ay u yeereen Madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe si ay uga wada xaajoodaan sida laga yeelayo shaqsiyaadka diidan Doorashada uu kusoo baxay kuna noqday Madaxweynaha Hir-Shabeelle, sanad kordhinta Baarlamaanka & kuraasta Baarlamaanka ee Gobolka Hiiraan.